I-Penthouse ene-terrace eqaqambileyo kakhulu embindini. I-WIFI
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguIganusca
Ipenthouse eqaqambileyo nethe cwaka embindini. Inyathelo elinye ukusuka kwisikhululo sikaloliwe kwaye kufutshane kakhulu noSodolophu wePlaza kunye nenxalenye yakudala yesixeko. Isitrato sizolile kakhulu, sisecaleni kweCampo Grande entle, eyona paki inkulu esixekweni.
Indawo yokuhlala ixhotyiswe ngokupheleleyo kwaye inoqhagamshelo lwe-WIFI, iofisi kunye ne-terrace.
"El Apartamento de Teo" ibhaliswe kunye neJunta de Castilla y León (VUT-47130)
I "Teo Apartment" inegumbi lokulala elinebhedi ephindwe kabini, igumbi lokuhlambela eligcweleyo elineshawari, iofisi, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlala elihonjisiweyo kunye nethala elihle nelimnandi kakhulu. Kukho uxhumano lwe-WIFI (ifayibha).
Indawo yokuhlala ixhotyiswe ngokupheleleyo, ine-elevator kunye ne-air conditioning.
Sineetawuli kunye nezinto zokulala, ukongeza kuzo zonke izinto zasekhitshini. Ngapha koko, ungasibuza nayiphi na imibuzo onokuthi unayo!
Indawo iyamangalisa kwaye inomtsalane. Sinelungelo ecaleni kwepaki enkulu esixekweni, iCampo Grande kunye nePlaza Zorrilla. Ukuhamba ngaphantsi kwemizuzu emi-5 siya kufika kwi-Plaza Mayor, kunye nommandla we-tapas (ibalulekile ukuba ufika eValladolid!). Sineofisi yabakhenkethi ecaleni kwethu, kodwa siya kukuvuyela ukukucebisa kwaye sikuncede ngexesha lokuhlala kwakho nathi, ukuba uyayifuna.
Umbuki zindwendwe ngu- Iganusca
Ngexesha lokuhlala kwakho kuya kuhlala kukho umntu onawo. Sithetha isiNgesi kunye ne-peu de Français :-)
Ungatsalela umkhombandlela othe chatha kunye nendawo echanekileyo ku-616 155 501
Inombolo yomthetho: VUT 47130